Jowhar.com - Somali news Leader
Kulan looga hadlayay arrimaha Jubooyinka oo maanta lagu qabtay magaalada Muqdisho (Sawirro)
Posted by master on June 18 2013 19:49:48
Kulan looga hadlayay arrimaha jubooyinka ayaa maanta waxaa Muqdisho ku yeeshay Xubno fara badan oo isugu jira qeybaha bulshada sida Odayaasha dhaqanka beelaha, waxgarad, Ugaasyo, Suldaano Culimaaudiin, dhalinyaro, Aqoonyahano iyo haween. Extended News
Kulan looga hadlayay arrimaha jubooyinka ayaa maanta waxaa Muqdisho ku yeeshay Xubno fara badan oo isugu jira qeybaha bulshada sida Odayaasha dhaqanka beelaha, waxgarad, Ugaasyo, Suldaano Culimaaudiin, dhalinyaro, Aqoonyahano iyo haween. Ugu horeyn kulankan ayaa la isku weydaarsaday talooyin la xiriiray sida lagu xalin karo arrimaha Jubooyinka iyo dadaalada iminka socda, iyadoo xubnihii ka qeyb galay kulankan ay dalbadeen in dalka aanay mar kale ka dhicin dagaalo sokeeye
Kulanka ayaa markii dambe waxaa lagu aqriyay war saxaafadeed looga hadlayay xaalada Jubooyinka waxaana aqrriyay Sheekh Ibraahim Maxamed Weydow.
1-In ay midoobaan shacabka degan Jubooyinka, ayna taageeraan nabadeynta.
1-Waxaa la soo dhoweeyey shirweynaha wada-tashiga arrimaha Jubooyinka ee ka soo baxay shirkii madaxda urur goboleedka IGAD kaasoo gogoshiisa ay dhigeyso dowlada Somalia kana dhacayo Muqdisho.
3-Sidoo kale waxaan soo dhoweynaynaa baaqii ka soo baxay QM ee ku saabsanaa inaan la hor istaagin shirka nabadeynta ee ay ku baaqday dowlada Somalia.
4-Waxaan cambaareynaynaa kana soo horjeednaa fara gelinta shisheeye ee caqabada ku ah nabadeynta jubooyinka.
5-Ugu dambeyn waxaan ugu baaqeynaa bulshada Soomaaliyed ee gudaha iyo dibeda iney taageeraan shirweyna nabadeynta Jubooyinka kaasoo aan rumeysanahay inuu mideyn doono shacabka Soomaaliyed ee jubooyinka una horseedi doono nabad iyo Horumar.
Waxaa kulankaas ka hadlay waxgarad uu ka mid ahaa Nabadoon Maxamed Xasan Xaad oo ka mid ah duqeyda Muqdisho kaasoo sheegay in dhibatada jubooyinka ka taagan ay tahay mid Soomaaliyed loona baahan yahay in fara gelinta dibeda laga daayo, taasoo uu xusay haddii ay ii socoto inaan wax xal ah laga gaareynin.
�Waxaan qabnaa wax wadahadal lagu waayey dagaal laguma keeno, 22 sano ayaan dagaalameynay wax aan khasaare iyo burbbur aheyn oo laga faa�iidey lama hayo, waxaan leenahay arinta Kismaayo waa in laga bixiyaa aniga xoreystay iyo qabiilkeygaa xoog badan, si cadaalad ahna maamulka loo qeybsadaa� ayuu intaa ku daray Xaad.
Waxaa sidoo kale ka mid ahaa xubnihii kulankaas ka hadlay Abuukar Shiikh Cismaan Ganey, Xasan Caydiid, Col. Cabaas iyo qaar kale oo ay ku jireenkaa haweenka Soomaaliyed, kuwaasoo dhamaantood sheegay in xalka jubooyinka uu ku jiro in laga qeyb galo shirka ay qabanaeyso dowlada, iyagoo dhinacyada Kismaayo ugu baaqay iney ilaaliyaan nabada.